Shiinaha wasakhda sare wasakhda graphite wasakhda iyo saarayaasha | Jitai
Qaabab isku dhafan oo dhaqameed ah ayaa caadi ahaan laga sameeyaa bir. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego sameynta caaryada iyo adeegsigooda loogu talagalay noocyada noocaas ah ayaa dhib ku qaba qaadashada qaababka isku dhafan iyo la shaqeynta qalabka isku dhafan. Tani waa natiijada isku dheelitirka isugeyn ee kuleylka ee u dhexeeya caaryada lafteeda iyo walxaha ku jira gudaha. Sidaa darteed, garaafku wuxuu u soo ifbaxay xulashada koowaad ee sameynta caaryada sababtoo ah sifooyinka la doonayo ee jirka iyo kiimikada. Jitai wuxuu iibiyaa noocyo aad u tiro badan oo caaryaal ah oo qaabeysan oo garaaf sare ah kaas oo si weyn u yareyn kara qiimaha qayb ka mid ah macaamiisheenna.
Graphite waa qaab kristal ah oo ka mid ah walxaha kaarboon astaamaha leh astaamaha soo socda:
1. Kuleylka iyo kuleylka korantada wanaagsan;
2. U adkaysata u nuglaanshaha kiimikada isla markaana aan si fudud uga fal celinayn biraha kala duwan
3. Isuduwaha balaarinta kuleylka oo hooseeya iyo xasiloonida kuleylka wanaagsan
4. Saliid ku habboon oo iska caabin ah
5. Si fiican ayuu wax u qabtaa kuleylka daran (inta badan biraha naxaasta ah ee heerkulka sinjiga ayaa ka sarreeya 800 ℃). Awooddu waxay u kordhisaa si isdaba joog ah kororka heerkulka
6. Waxqabadka mashiinka wanaagsan, waxaa loo isticmaali karaa qaab-dhismeedyo qaabab isku dhafan leh iyo xaaladaha sax ahaanta sare loo baahan yahay.
1.Waxaa loo adeegsaday shubay joogto ah iyo semi-joogto ah ee biraha non-ferrous. Awoodda kuleylka ee wanaagsan iyo tayada is-saliidaynta ee maadada awgeed, cabbirka ingotku wuxuu ahaanayaa mid sax ah, dusha sare ayaa wali ah mid hagaagsan, qaab dhismeedkeeda macdanta ah wuxuu isku mid ahaanayaa xitaa ka dib fureyaal badan Tani waxay u oggolaaneysaa kororka xawaaraha riixista, iyadoo la hubinayo in howsha xigta ay isla markaaba bilaaban karto ka dib. Tani waxay si weyn u hagaajineysaa heerka waxsoosaarka iyo tayada wax soo saarka.
2. Caaryado loogu talagalay cadaadiska tuurista: Garaafka macmalka ah ayaa si guul leh loogu isticmaalay tuujinta cadaadiska biraha aan birta ahayn. Tusaale ahaan, zinc alloy iyo castings alloy copper oo lagu soo saaray wasakhda tuuraya cadaadiska ee walxaha garaafka aan caadiga ahayn ayaa badanaa loo isticmaalaa qaybaha baabuurta.
3. Qaabab qaabeysan oo loo yaqaan 'graphite' oo loo yaqaan 'castrifting casting': Caaryado Graphite ah ayaa si guul leh loogu adeegsaday shubista sanduuqa dhexe. Shirkadaha Mareykanka waxay isticmaaleen wasakhahaasi qaabdhismeedka garaafka ee artifishalka ah oo dhumucdiisuna ka badan tahay 25mm si ay si xarrago leh ugu tuuraan geedaha naxaasta ah, duurka, iyo gacmo gashi.
4. Qaabab duufaan kulul: Garaafka macmalka ah ee loo isticmaalo wasakhahaasi kulul ayaa leh laba astaamood oo loogu talagalay kala daadinta carbideyaasha sibidhka ah:
J) Haddii heerkulka inta lagu jiro cadaadiska la kordhiyo oo la gaarsiiyo 1350 ilaa 1450 ℃, cadaadiska unugga loo baahan yahay ayaa loo yareyn karaa 1/10 ee waxa loo baahan lahaa haddii caaryadu qabowdo.
B) Cadaadiska iyo kuleylinta waxaa loo sameeyaa si isku mid ah, iyo jir cufan leh ayaa la heli karaa ka dib markii muddo gaaban oo dheecaan ah.
5. Caaryado loogu talagalay wax ku sameysmada muraayadda: Waxyaabaha loo yaqaan 'Graphite' ayaa noqday walxo lama huraan u ah in lagu shaqeeyo muraayadda Waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo wasakhda tuubooyinka dhalooyinka, xusullada, fangaska iyo noocyo kale oo kala duwan.
6. Shaandhaynta wasakhda iyo wasakhda kale ee dhejiska ka dhigaya: Sababtoo ah kuleylka kuleylka hooseeya ee garaafka macmalka ah, wasakhda wasakhahaasi iyo qaansooyinka transistors waa la soo saari karaa. Hada si balaaran ayaa loo isticmaalay waxayna noqotay shey lagama maarmaan u ah horumarinta warshadaha semiconductor.
Isbarbardhigga waxqabadka ee qalabka caaryada sida caadiga ah loo isticmaalo iyo qalabka isku dhafan
Isugeynta Ballaarinta Kuleylka
Fiber Kaarboon / Epoxy
Fiber Glass / Epoxy